ဗဟုသုတ Archives - Page 240 of 240 - BuzzFeed Myanmar
မျက်ခုံးမွှေး ဆွဲရတာ တော်တော်နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်မဖြစ်တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ မျက်ခုံးမွှေးအပေါ်မူတည်ပြီး မျက်နှာရဲ့အလှက စကားပြောလာပါလိမ့်မယ်။ မျက်ခုံးမွှေးက အရမ်းသေးသွား ရင်လည်း လူကြီးပုံပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို မျက်ခုံးမွှေးက အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သလဲ။ ကိုရီးယား မင်းသမီးတွေလို မျက်ခုံးမွှေးဆွဲနည်းကတော့ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်လိုက်နော်။ ၀၁. ကိုယ်လိုချင်သော မျက်ခုံးမွှေးပုံစံကို ပုံပါအတိုင် အပြင်မျဉ်းကို အရင်ဆွဲပါ။ ၀၂. အပြင်မျဉ်းအပြင်မှာရှိသော မျက်ခုံးမွှေးကို ရိတ်ပါ။ ၀၃. မျက်ခုံး အပေါ်တစ်ခုထဲမဟုတ်ပဲ ဘေးကိုပါ ရိတ်ပါ။ ၀၄. မျက်ခုံးအောက်မှာရှိသော ပိုနေသော မျက်ခုံးမွှေးကိုလည်း ရိတ်ပါ။ ၀၅. မျက်ခုံးထိပ်မှာရှိသော ရှည်နေသော မျက်ခုံးမွှေးကို ဘီးဖြင့် အောက်ကနေ အပေါ်သို့ ဖီးပြီး ထွက်လာသော မျက်ခုံးမွှေးကို ညှပ်လိုက်ပါ။ ၀၆. မျက်ခုံးနောက်ပိုင်းမှာရှိသော ပိုနေသော မျက်ခုံးမွှေးကိုလည်း ပုံပါအတိုင်း […]
နှုတ်ခမ်းတစ်စုံရဲ့ လှပမှုဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အမျိုးသမီးတိုင်း လိုလိုမှာ အနဲဆုံး နှုတ်ခမ်းဆိုး ဆေးအရောင် ၃-မျိုးလောက်ရှိတတ်ကြပြီး၊ အပြင်သွားခါနီးတိုင်း မိမိဝတ်ဆင်မယ့် အ၀တ်အစားအရောင်နဲ့အနီစပ်ဆုံး နှုတ်ခမ်း နီဗူးလေးကို ထုတ်ဆိုးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပင် နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးအကူအညီသုံးပြီးလှပနေပါစေ မိမိရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားအရောင်ကို ပန်းဆီရောင်လေးသဖွယ် သဘာဝအတိုင်းလှနေချင်တာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒပါ။အမျိုးသားတွေလဲ ထို့အတူပါဘဲ နှုတ်ခမ်းမည်းမည်းကြီး မဖြစ်ချင်ကြပါဘူး။အချို့အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတွေမှာ အရွယ်မတိုင်မီ နှုတ်ခမ်းသားတွေ မည်းလာတတ်ကြပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ကော်ဖီ၊ လ္ဘက်ရည်၊ ဆေးလိပ်လွန်စွာသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ကဖိန်းဓာတ်ရဲ့ ဘေး ထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ နေပူထဲအထွက်များ၍နေလောင်ခြင်း၊ ရေနွေး၊ ဟင်းချို စတဲ့အရည်ပူပူတွေကို ခွက်ပူပူ ထဲ ကနေစုပ်ယူသောက်လေ့ရှိခြင်း၊ခဲဓာတ်များတဲ့ နှုမ်းခမ်းဆိုးဆေးအန္တရာယ၊် ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့်သောက်သုံးနေရတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေရဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု စတာတွေကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားကို […]
တရားဝင် အလှကုန်ပစ္စည်းကို သုံးစွဲကြရန် အက်ဖ်ဒီအေ တိုက်တွန်း
မြန်မာပြည် ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းချနေ တဲ့ အလှ ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို အန္တရာယ်ရှိမရှိ စစ်ဆေးစမ်း သပ်ဖို့ ခက်ခဲတာကြောင့် သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ တရားဝင်တင်သွင်းတဲ့ အလှကုန်တွေကိုသာ အဓိ ကထား ၀ယ်ယူသုံးစွဲကြဖုို့ အစားအသောက် နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနက အကြံပြုတိုက် တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းအင်အားနည်းပါး တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်း ဈေးကွက်ထဲ မှာ ရောင်းချနေတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးကို သုံးစွဲဖို့ သင့် မသင့် မစစ်ဆေးနိုင်သေးဘူးလို့ အစား အသောက် နဲ့ ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (အက်ဖ်ဒီအေ) တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလှကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်မျိုးစုံကို အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွေကနေ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ တင်သွင်းရောင်းချတာရှိသလို ပြည်တွင်းမှာလည်း ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ သွင်းကုန်လိုင်စင်နဲ့ သွင်းလာတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း အားလုံးကို အက်ဖ်ဒီအေ […]